Ọ dịtụwo mgbe ị hụrụ onwe gị a ọnọdụ ebe ị mkpa a egwu ma ọ bụ album i nwere na n'ihi ma Computer okuku, iTunes echichi, ịzụ a ọhụrụ PC ma ọ bụ ekwentị na ọnwụ; dị otú ahụ a music ma ọ bụ album ike agaghịkwa ịchọta. Gịnị ma ọ bụrụ na ọ dị ukwuu ọ pụtara? Ọ pụrụ ịbụ ihe Evergreen soro gị ụfọdụ ịhụnanya dị ukwuu ma ọ bụ a song na lifts obi gị mgbe ị na-eche ala. Mgbe ahụ transfering gị music ka a USB flash mbanye bụ ihe magburu onwe echiche.
Ịmata na ị chọrọ nyefee gị music ka a USB flash mbanye bụ magburu onwe Otú ọ dị, ya abịa na a ịma aka; Olee otú ị nyefee ndị music si gị iPod ka USB flash mbanye? Ebe a 2 ngwọta na-nyere gị nyefee music si iPod ka USB flash mbanye. Ị na-nzọụkwụ site nzọụkwụ omume ahụ ga-abụ nke ezigbo enyemaka ma tupu anyị kụrụ ntu nke n'isi ya.
Ekwu, sị: Ọ fọrọ nke nta otu nyefee music si iPhone / iPad / iPad Obere ka USB Flash mbanye.
Ngwọta 1. Iji aka transfer music si iPod ka USB flash mbanye
Ngwọta 2. Easily Nyefee music si iPod ka USB flash mbanye na TunesGo
Nke a bụ otu n'ime ụzọ nke pụrụ inyere gị nyefee gị music si iPod Iji aka nyefee music si iPod ka USB flash mbanye. Ọ ihu ọma na-achọ ndị iPod eriri USB, gị iPod na gị onwe onye na kọmputa.
Nzọụkwụ 1 Jikọọ gị iPod gị na kọmputa.
Nzọụkwụ 2 Jikọọ gị USB Flash Drive gị na kọmputa.
Jikọọ gị USB Flash Drive gị na kọmputa n'ịhụ na USB Flash Drive nwere ezu ohere maka music ị chọrọ mbubata.
Nzọụkwụ 3 Ngosipụta zoro ezo faịlụ
Nzọụkwụ 4 Copy music faịlụ
Nzọụkwụ 5 Tapawa music faịlụ gị USB Flash mbanye.
Mepee disk nke USB Flash Drive, cteat a ọhụrụ nchekwa ma ọ bụ imeghe exiting nchekwa, mgbe ahụ, mado, nke a ga tinye ihe niile họrọ music faịlụ gị USB Flash mbanye.
Na TunesGo, ị nwere ike ugbu a mfe nyefee gị music na songs si gị iPod ka USB Flash Drive na dị nnọọ ole na ole dị mfe nzọụkwụ, ọ bụ fọrọ nke nta otu ụkwụ na ụkwụ "Nyefee Music n'etiti iphone na android" na video egosi n'okpuru:
Iji USB na wee na gị iPod, jikọọ gị iPod gị na kọmputa. Ẹkedori TunesGo site abụọ na ịpị ya mgbe ị rụnyere ya na kọmputa gị. TunesGo ga-enwe ike na-akpaghị aka ịchọpụta gị iPod na ọdịnaya na gị iPod haa haziri na n'aka ekpe nke onye ọrụ interface. Agbasa 'ngwaọrụ', otú i nwere ike nweta gị music faịlụ site na gị iPod.
Nyefee music na songs si iPod ka USB flash mbanye.
Mgbe unu gbasara 'ngwaọrụ', gị niile songs ga-egosi na n'akụkụ aka nri nke isi window nke TunesGo. Họrọ niile music faịlụ na ị chọrọ nyefee USB Flash Drive si gị iPod, a nwere ike mere site na-ejide ala 'Ctrl' isi mgbe gị click na niile music faịlụ na ị chọrọ nyefee USB Flash mbanye. N'elu akụkụ nke isi window, pịa 'Export ka' 'Mbupụ na My kọmputa' button, wee họrọ na nchekwa na USB disk (i nwere ike creat a ọhụrụ nchekwa na begining), mgbe ahụ gị transfer ga-amalite , na-adabere na ọnụ ọgụgụ nke tracks na ị na-ebufe, usoro ekwesịghị oge dị ukwuu.
Mgbe mbupụ ka dechara, ị ga-ọma-agafere gị niile music si gị iPod gị USB Flash mbanye. Mgbe ahụ ị pụrụ ịnụ ụtọ-ege ha ntị na kọmputa gị ma ọ bụ ị nwekwara ike mmekọrịta ha gị na ngwaọrụ ndị ọzọ na-enwe-ege ha ntị na ọ laa. TunesGo enye mfe na kacha ụzọ aka ka siri ike aga-eme na gị Apple ngwaọrụ a dị mfe na ogologo-atụ ụzọ na-agaghị ọbụna imebi ngwaọrụ gị. Ọ bụkwa maka ma Windows PC na Mac.
Otú e si etinye Foto ndị dị na iPod na Zero Loss
> Resource> iPod> otú nyefee Music si iPod ka USB Flash Drive